̀ Na-ege Ntị? | Martech Zone
You nwetụla mgbe ị wepụtara oge iji rute akara ma ọ bụ ụlọ ọrụ na ntanetị iji kọọ maka nsogbu ndị ahịa ma ọ bụ esemokwu na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ?
Have nwetụla mgbe mmechuihu gị ma ọ bụrụ na akara ma ọ bụ ụlọ ọrụ azaghị arịrịọ gị? Arịrịọ ahụ i wepụtara oge ịrịọ?
Ka anyị chee ya ihu - anyị niile na-arụsi ọrụ ike na ndụ na-abanye n'ụzọ nke mgbasa ozi mgbe ụfọdụ. Ma, ọ bụkwa [ụfọdụ] ọrụ anyị ka anyị na-ahụ maka ịza ọ bụla (ezi uche & ezigbo) arịrịọ na netwọk mgbasa ozi mgbasa ozi anyị. Maka ọtụtụ ndị ahịa m na-ere ahịa, ha na-aga ozugbo na ngalaba mgbasa ozi mmekọrịta iji kọọ nsogbu ha nwetara na akara ahụ. Mgbe ha na-enwetaghị azịza ma ọ bụ nzaghachi, ọ bụ oge iji malite iche maka ịgbanwe ụdị. Na ụwa nke ndị ahịa na ọtụtụ ụdị, nke a bụ ihe egwu dị egwu maka ụlọ ọrụ ị na-ewere.
Mgbe ahụ, enwere akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ: ụfọdụ ndị na-ekwu maka ụdị ndị dị n'ịntanetị, mana ha agaghị akpọ akara ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ ghara ịgwa gị na mmadụ mere mkpesa banyere ha. Nke a nwere ike bụrụ ọdachi dịka ịzaghị. Enwere ọtụtụ ohere furu efu mgbe anaghị eme ka ị mata mgbe akpọrọ aha gị ma ọ bụ na ị naghị enyocha data ahụ.
Ayszọ ị ga - esi meziwanye mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Tọọ alerti maka akara ngosi aha gị - Adaberela na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta gwa gị mgbe mmadụ kpọtụrụ gị aha; Gbaa mbọ hụ na melite Google Alert maka okwu dị mkpa (aha ụlọ ọrụ, aha njirimara ụlọ ọrụ, ngwaahịa ụlọ ọrụ, wdg) ma ọ bụ jiri usoro egwu egwuHootsuite .
Kpebie ihe ị ga-eme mgbe ị ga-aza ya - Oge ụfọdụ, iwe na-ewe ndị mmadụ mgbe ị naghị azaghachi n’oge. Ọtụtụ oge, ndị mmadụ nwere ike iche na ụdị dị maka nzaghachi mgbasa ozi mmekọrịta. Nke ahụ abụghị eziokwu mgbe niile. @IGIHE na-arụ ọrụ dị mma nke isetịpụ atụmanya ndị a. Ha na-enye oge na ụbọchị ha ga-adị njikere ịzaghachi arịrịọ:
Nye atụmatụ B - Ọ bụrụ n’inweghị nkwado mgbasa ozi mmekọrịta elekere 24, wee nwee njikọ dị yana ozi ịkpọtụrụ ndị mmadụ nwere ike iji rute ụlọ ọrụ gị n’oge ọ bụla. Aga m akwado ịnweta email (ma ọ bụ ụdị), ekwentị, ma ọ bụ usoro nkata.
Wepu nsogbu a na offline - Mgbe ị na-ege ntị, ọ bụrụ na ị zutere onye ahịa iwe, wee gbalịa ịkpọrọ onye ahịa ahụ na offline. Nye gị nọmba ekwentị ma ọ bụ ozi email enwere ike iru gị, wee malite mkparịta ụka otu esi enyere aka. Ozugbo edoziri nsogbu ahụ, ịnwere ike ịdee n'ihu ọha otu ị siri dozie nsogbu ahụ ma jụọ onye ahịa ma afọ juru ha. Availablenweta ma mara ihe a na-ekwu banyere ika gị bụ isi. Ọ ga - eduga ndị ahịa nwere obi ụtọ (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha enweghị obi ụtọ nwa oge), na ego buru ibu.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahana-elekọta mmadụ na-ege ntịelekọta mmadụ medianlekota oruvistaprint